KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 13-aad: Caawo iyo Sheekada oo meel xun gaartay – Filimside.net
December 5, 2017 Cabdiraxmaan Anteeno
Taariikhda: December 5, 2017
Sheekada qeybtaan xoogaa waxaa ku jiro dareen badan marka hadii aad dareen dhawdahay waxaan kuugu naseexeynayaa inaadan akhrisan, waana sababta keentay inay xalay baaqato xalqadaan, kadib markii aan la tashanay akhristayaal badan waxaa noo soo baxday inaan sideeda ku daabacno maadaama ay tahay sheeko socoto oo haddii qeyb laga tago aysan micno yeelaneyn.
Waxay sheekada noo mareysay qeeybtii hore markii xamaaligii gabdhihii ku yiri aan idinla joogo waxaan ahay nin diin ceeb qarin doono idina difaaci doono sidoo kalana waxaad ubaahantihiin ayaan idiin qaban doonaa asigoona halkaas ka tiriyay tix yaroo gabay ah oo uu kaga hadlaayo siduu ugu fiicanyahay sirta heynteeda.
Markey gabdhii maqleen hadalkii xamaaligi iyo tixdii gabayga aheyd iyo qaabka uu uqanciyay wiilka ayay ka ogolaadeen inuu la joogo laakiin hal shardi ayay ku xireen taasoo aheyd:
Hana weydiinin waxaanan ku quseynin waayo waxaad la kulmi doontaa waxaan ku raali galin.
Wiilkii wuu ogolaaday hadalkooda.
Markaas ayay gabadhii koowaad istaagtay wiilkiina gacanta soo qabatay weyna waday iyadoo geysay musqusha kadibna waxay ku amartay inuu qubeysto oo uu is nadiifiyo waxayna siisay wax kasta oo uu ubaahnaa.
Kadib markii uu soo qubeystay ayuu gabdhihii uyimid iyagoo qadadii diyaariyay markaas ayay si wada jir ah u qadeeyeen markii la qadeeyay ayay midii 3aad soo qabatay dhalo khamri ah oo meesha taalay waxayna gabdhihii kale midkasta u shubtay koob sidoo kalana wiilkii ayay u shubtay.
Markey cabeen oo khamrigii caqligooda gaaray ayay sarqaameen ayay gabdhihii wiilkii usoo dhawaadeen asigana wuxuu isku maleeyaa inuu riyoonayo wuuna aamini la’yahay inuu gurigaan qasriga ah sadaxdaan gabdhood ee sidaaan u quruxda badan kaligiis la joogo.
Markaas ayay halkii dhunkasho qaniinyo ka bilaabatay waxyar kadib waxaa istaagtay gabadhii weyneyd waxayna iska wada siibtay dharkii ay gashneyd iyadoo barkad lagu dabaasho oo meesha ku taaalay gashay oo isku tuurtay.
Markaas ayay xoogaa inta dabaalatay biyihii barkada ku jireena afka kusoo qaaday kusoo shubtay wiilkii oo meesha fadhiya lana ciyaarayo gabdhihii kale, kadibna waxay ku laaabatay biyihii iyadoo si fiican isku dhaqday min madaxa dhabarka caloosha cajarada ilaa lugaha .
Markaas ayay iyadoo sidii uqaawan biyihii kasoo baxday waxayna ku fariisatay dhabtii wiilkii xamaaliga ahaa,
kadibna inta cajarada kala qaaday ayay wiilkii ku tiri iyadoo gacanteeda ugu ushaareyso farjigeeda “xabibiibi kan magaciisa iisheeg”
Markaas ayuu ku dhahay “Waa farjigaaga markaas ayay dhunkatay dhagtana ka qaniintay si qaniinyo tartiib ah kadibna inta qoorta ka qabatay ayay ku tiri “ma xishooneysaa? hadaadan xishooneynin magaciisa iisheeg”
Markaas ayuu kudhahay waa rixinkaaga
Markaas ayay inta sidii hore yeeshay hadana ku tiri maya ee magac kale sheeg,
Markaas ayuu hadana yiri s……kaaga kadib ayay hadana tiri maya ee ii sheeg magaciisa siduu marba magac ugu sheegayay ayuu markii dambe yiri adiga iisheeg magaciisa.
Markaas ayay tiri waa mirihii beerta.
Kadib ayaaa tii labaad inta dharkii iska siibtay biyihii gashay kadibna markey ku qabeysatay ayay waxay kasoo baxday iyadoo qaawan, kadibna waxay ku fariisatay dhabtii wiilkii xamaaliga ahaa, markaas ayay inta luga kala qaaday wiilkiina farjigeeda gacanta usaartay ku dhahday magaciisa iisheeg.
Markaas ayaa waxaa dhexmaray hadal lamid ah sidii tii hore oo kale ugu dambeyntii iyada ayuu ku dhahay magaciisa iisheeg, markaas ayay ku tiri waa biyihii Samsuum.
Kadibna tii sadaxaad ayaa kacday oo iyadana isla sidii yeeshay markaas ayay weydiisay isla magacii markaas ayuu ku yiri bal adiga iisheeg, waxayna ku tiri waa xeradii Abii Mansuur.
Kadibna wiilkii xamaaliga ahaa ayaa inta toogtiisa dharka iska bixiyay barkadii kusoo dabaashay.
markuu barkadii kusoo dabaashay ayuu asigoo qaawan kasoo baxay gabdhihii ayuuna uyimid inta soo kor istaagay ayuu ku yiri inta geedkiisii gacanta ku qabtay kan magaciisa??
markaas ayay qosleen waxayna dhaheen waa g….kaaga,
markaas ayuu dhahay maya eee iisheega magaciisa markasta oo ay magac sheegaanba midood inta soo qabto oo uu shumiyo ayuu dhahayay maya.
markii dambe waxay dhaheen adiga noo sheeg,
markaas ayuu dhahay “waa baqashii jazuur ee daaqday mirihii buundada cabtayna biyihii samsuum, kadiban ku hoyatay mooradii abii mansuur”
markaas ayay wada qosleen halkii ayaana la camirtay,
sidii maalintii oo dhan ubaashalayay wiilkii oo uu marba mid ufuulayay iyagana hoosta uga jireen dhidikiina meesha sidii biyaha uga da,ayay ayaa waxaa la gaaray habeenkii.
iyagoo faraxsan oo meeshii fadhiya ayaa albaabkii lasoo garaacay,
markaas ayay gaabdhihii isfiiriyeen qofka saacaan albaabka gurigooda soo garaacay,
kadibna midood ayaa kacday si ay ufiiriso qofka albaabka soo garaacay
Waxaa Aqrisay 3,931
ninka la socda sheekafa says:
caaway ugu macaaneed sheekadu hhhh
Hanad Oscar says:
Zheekada mnta waa yareYseen
Aqaayarta filimside.net waa mahad santihiin lkn xogaa shega ku dara oo wee yarta hay thnks
aqoon yahan garaad says:
sheekada sideeda noogu wada plz idinkoo waxba ka tagayn